Ry havana malala mpiray antoka ao amin’ny Tompo,
Noho ny fahasoavan’Andriamanitra, dia amim-pifaliana no hahazoanay mizara aminareo ireto fampianarana 1 sy 2 izay santatry ny andiam-pampianarana amin’ny Programa Fampianarana Maharitra momba ny Fifohazana izay notanterahina tao amin’ny FLM Tanjombato nanomboka tamin’ity Taona 2020 ity.
Ny fampianarana avoaka dia notovozina sy mirafitra amin’ny fampianaran’ireo Raiamandrenintsika Tobilehibe Efatra miray amin’ny FFPM, ary zaraina amin’ireo Toby Masina sy ny Sampana Fifohazana ary ny Zanaky ny Fifohazana tsy an-kanavaka eto an-toerana sy any ivelany.
Maniry sy matoky izahay fa ho fitaovana hanampy anareo tompon’andraikitra ny fampianarana sy ny asan’ny Fifohazana ity Programa ity. Koa dia mirary ny fahafenoan’ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika sady Tompon’ny asa homba anareo mandrakariva!
D.Rabarihoela Bruno sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin’ny « Hira & Filazantsara ».
NY FOTO-PANORENANA NY FIFOHAZANA TETO MADAGASIKARA Fampianarana : D.Rabarihoela Bruno [06.03.21] « Miorena tsara, aza miova » 1 Kor.15 :58a.
9 mars 2021 by mpiandraikitra	Leave a Comment
1/ Ny fototra ara-tantara : izany dia tamin’ny alalan’ireo Raiamandrenin’ny Fifohazana Tobilehibe Efatra miray amin’ny FFPM : Dada Rainisoalambo (Toby Soatanàna 1895-1901), Neny Ravelonjanahary (Toby Manolotrony 1906-1972), Mama Volahavana Germaine Nenilava (Toby Ankaramalaza 1941-1998), Dadatoa Rakotozandry Daniel (Toby Farihimena, 1946-1947). 2/ Ny Teny Fanevan’ny Fifohazana : « Jesosy SY ny Soratra Masina Irery Ihany » … [Read more…]
Posted in: Fascicule (10 Pejy)
”VELOMY NY FIFOHAZANA” FAMPIANARANA I : ”NY FOTOTRA FIORENAN’NY FIFOHAZANA”
19 mars 2020 by mpiandraikitra	Leave a Comment
DRAFITRY NY FAMPIANARANA FIZARANA I : FAMELABELARANA Perikopa: “Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana any Sardisy: Izao no lazain’ilay manana ny Fanahy fiton’ Andriamanitra sy ny kintana fito: Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona hianao, kanjo maty ihany. Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako (Na: … [Read more…]
”VELOMY NY FIFOHAZANA!” FAMPIANARANA II : “MAHA-VOAVONJY VE NY FAMOAHANA DEMONIA ?”
7 mars 2020 by mpiandraikitra	Leave a Comment
I/ Ny fipetraky ny resaka: Toy ny miendrika hafahafa ihany ny fihainoana ny lohateny banjinina eto. Fa sanatria ve ny famoahana demonia tsy hiasa hahavonjy ny olona? Kanefa ho amin’izany indrindra no tsara anaovantsika fanamarihana fa misy ny olona “afaka devoly”, saingy tsy voavonjy ny fanahiny. Tsaroana ny tenin’i Jesosy manao hoe : “Fa inona … [Read more…]
« REVIVE THE REVIVAL ! »
16 février 2020 by mpiandraikitra	Leave a Comment
The basic idea: Revival is alive, powerful and enduring when it is founded, united and remains attached to the foundation on which God built it. It is written : « Look upon the rock from which you were cut, on the hollow of the pit from which you were drawn » (Isa.51: 1b). The points dealt with: … [Read more…]
« RAVIVEZ LE REVEIL ! »
L’idée de base : le Réveil est vivant, puissant et pérenne quand il se fonde, s’unit et reste attaché au fondement sur lequel Dieu l’a bâti. Aussi, « Portez les regards sur le rocher d’où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d’où vous avez été tirés » (Es.51:1b). Les points traités … [Read more…]
”VELOMY NY FIFOHAZANA !”
Ny foto-kevitra: Velona sy mahery ary maharitra ny Fifohazana rehefa miorina sy miray ary tsy miala amin’ny fototra nanorenan’Andriamanitra azy. Koa “Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo” (Isa.51:1). Ny votoatin-kevitra: Raha ny tantara no zohina, ny fanorenana sy fanatanterahana ny asan’ny Fifohazana teto Madagasikara dia tamin’ny alalan’ireo Raiamandreny izay … [Read more…]
NY FANEHOAMPANOKANANA AN’I MAMA VOLAHAVANA GERMAINE NENILAVA
10 juillet 2019 by mpiandraikitra	1 Comment
NY FANORENANA, NY HAFATRA, NY TANTARA NY FANEHOAM-PANOKANANA SY NY FIAINAM-PIRENENA: FAMINTINANA. – Ny Fanehoam-panokanana dia famantarana manondro an’i Jesosy Kristy sy ny asam-panavotana nataony, izay nasehony sy nampahafantariny tamin’ny alalan’ny asa nampanaoviny an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava mpanompony. Natsangan’Andriamanitra teto amin’ny firenena izany mba hilazana ny efa nifidianany azy ho tany hanorenany ny fanjakany … [Read more…]
Ny Fifohazana sy tsy Fifohazana
8 juin 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Maro ankehitriny ireo hetsika na hetsiketsika izay mitonona ho « Fifohazana » na « Fifohazam-panahy ». Manoloana izany dia nampahafantarin’ny Fiangonana sy ireo RAR sy Komity tompon’andraikitry ny Fifohazana fa misy foto-piorenana mazava sady azo antoka ary tsy miova na azo ovàna ny Fifohazana. Ny tiana ambara eto dia misy tokoa mantsy ny atao hoe « Fifohana marina”, na “tena … [Read more…]
“NY LOVA NAPETRAK’IREO RAIAMANDRENIM-PIFOHAZANA”
18 novembre 2018 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fifaliana mandrakariva ho antsika, ry havana, ny ahazoantsika mitafa sy midinika eto indray anio, mikasika ny Fifohazam-panahy sy ny Asan’ny Fifohazana izay nataon’ny Tompo eto amin’ny firenentsika. Koa dia mirary ny fahasoavan’ny Tompo mbola harotsany be dia be amintsika eo am-panarahana ity fandaharana ity. Ho voninahitr’Andramanitra Tompontsika. Hivavaka isika: “Tompo ô; misaotra indrindra anao izahay … [Read more…]
27 décembre 2017 by mpiandraikitra	Leave a Comment
1/ INONA NO ATAO HOE « FIFOHAZANA » ? * Ny foto-piorenana: manaiky sy mitandro ny fiandrianan’i Jesosy Kristy sy ny fahefana fenon’ny Soratra Masina amin’ny fampianarana sy ny fitaizam-panahy ary ny fomba fandaminan-draharaha sy fitantanana ankapobe ny asan’ny Fifohazana. Fototra tokana sy iombonan’ny Tobilehibe Efatra ireo, – Soatanàna, Manolotrony, Ankaramalaza, Farihimena -, na dia misy aza … [Read more…]